Company Profile - Getwell elektroniki (Huizhou) Co., Ltd
Getwell elektroniki (Huizhou) co., LTD. i amashishini Sino-zangaphandle joint venture, yasekwa ngowe-2004 sazisa ukuba njengomnye eyona abaziingcali umenzi inductor eTshayina, apho ngugqirha imveliso inductor kwikhithi, SMD inductor, Toroid Ikhoyili, Radial Inductor Lead and High Frequency transformer. iimveliso zethu izicelo ngokubanzi kumandla yabathengi, ukukhanyisa, unxibelelwano, lezixhobo, zonyango, ukhuseleko kunye namandla entsha, photovoltaic yokutshaja mfumba, elektroniki izithuthi kunye namanye amacandelo.
Okwangoku, Getwell elektroniki iqeshe abasebenzi 200, kuquka 20 amava atyebileyo iinjineli, kwakunye 12000 yesikwere seemitha kwindawo mveliso mihla. Iminyaka 14 ubugcisa bemveliso lobungcali kunye namava nolawulo. Inkampani yethu inkqubo egqibeleleyo yolawulo, kwakunye kwiminyaka engaphezu kweshumi zobungcali inductance kubuxhakaxhaka bokuvelisa, abasebenzi abaqeqeshiweyo nabanobugcisa, izixhobo imveliso ngokupheleleyo kwakunye novavanyo isixhobo, ezifana umatshini oluzenzekelayo inaliti, umatshini pin oluzenzekelayo, umatshini uphawu oluzenzekelayo, njalo-njalo.
Ngenxa yokusebenza ezinzileyo kunye nexabiso kukhuphiswano, iimveliso zethu ezithengisa kakuhle kulo lonke ihlabathi, yaye mveliso bethu banamalungelo Rhweba ngaphakathi no Rhweba esizimeleyo, kunokusinceda ukuba kwintsebenziswano engcono kunye nabaxumi. Ngoku inkampani yethu iye yaba kwishishini lokuvelisa elikhulu-ngomlinganiselo imishini, nokuhambisa kwaye ekrelekrele.
Getwell elektroniki bekulungele ukunika abathengi kunye imveliso egqwesileyo kunye neenkonzo. Thina ngokunyanisekileyo ebheka phambili ukuseka elide ukusebenzisana ishishini elide kunye nawe kwaye ukudala imeko win-win.
inductor iphiramidi ebonisa ayitshi , smd coil inductor, 22uh inductor smd, amandla inductor, 100 microhenry ziqu inductor , iphiramidi ebonisa ilothe inductor ,